Sintomy Cessna 172 Bush Kit G1000 MSFS 2020 - Freeware
Ny Cessna 172 Skyhawk Bush Kit G1000 dia mpikambana ao amin'ny fianakaviana Skyhawk afaka miverina sy miantsona fohy (STOL) miorina amin'ny Lycome 210 HP STC. Ity dia patch an'ny Skybok Asobo noforonin'i Babolu izay manampy fiaramanidina vaovao amin'ny hangar anao. Ny installer automatique dia miorina amin'ny fisie baglu-c172-bush-g1000.zip.
Ny maodely 3D an'ny Bush Kit dia namboarina niaraka tamin'ny lozisialy Blender avy amin'ny fanondranana ilay maodely voalohany an'ny Skyhawk G1000 avy ao Asobo. Ny firafitra sy ny sarimiaina rehetra eo ivelany dia tokony havaozina ary mifanaraka amin'ny famaritana voalohany. Ny kodiarana sy tongotra Bush dia avy amin'ny maodely Asobo c152.
Misy totalin'ny atiny telo tafiditra ao izay tena tsara kalitao.
Updated on 22 / 08 / 2021 - Version 2.3.1
Updated on 20 / 08 / 2021 - Version 2.3.0
Updated on 10 / 08 / 2021 - Version 2.1.3
- Vokatry ny fipetrahana vaovao (loto, lanezy, ahitra, rano ...) misaotra an'i Carbonprop
- Bitsika misy sisiny miaraka amin'ny jiro taxi namboarina noho ny PopS738
- Ny mpanamory sy ny atitany dia tsy hanjavona ivelan'ny fiaramanidina intsony
Mbola misy asa tokony hatao amin'ity maodely ity, indrindra amin'ny maodelin'ny sidina izay mbola mahery vaika.
Nangataka tamin'i Asobo ny fidirana amin'ireo rakitra tsy hita (voafafa) amin'ny kinova kilasika aho mba hananana kokpit miasa tanteraka. Manantena aho fa homen'izy ireo amin'ny modders izany.
Updated on 18 / 06 / 2021 - Version 2.1.2
- Tena mihodina amin'ny lala-mahitsy izao ny propeller
(tokony ho namboarina teo aloha io)
Updated on 03 / 06 / 2021 - Version 2.1.1
- Miasa tsara izao ny cockpit mahazatra! Ny switch avionics dia ok, tsy misy mixup amin'ny bokotra, sns.
Misaotra betsaka an'i MikeFear303 nahita ny fanamboarana (panel.xml + systems.cfg)
Nohavaozina taminy 21 / 05 / 2021 - Version 2.1.0
- famolavolana ny kodiarana sy ny kodiarana (sisiny sy eo aloha)
- aty madio madio 4
- aty 4 maloto sy / na efa antitra